FANDRAISANA ANDRAIKITRY NY BIANCO : Nadoboka am-ponja ilay nanodinkodim-bola 300 tap ariary | NewsMada
FANDRAISANA ANDRAIKITRY NY BIANCO : Nadoboka am-ponja ilay nanodinkodim-bola 300 tap ariary
Par Freenews sur 23/05/2017
Tsy vitsy ireo mpanodinkodim-bola no mandalo ety.
Taorian’ny fitarainana niseho teo anivon’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly, naiditra am-ponja vonjimaika, omaly, ny tomponandraikitra iray misahana ny famatsiana ny rano fisotro madio, tetikasa novatsian’ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana (BAD). Hisy indray ve ny fifampiarovana amin’izao raharaha izao?
Vaky am-batolampy ny resaka momba ny fanodinkodinam-bola teo anivon’ny tetikasa rano fitsotro madio novatsian’ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana. Mihoatra ny 300 tapitrisa ariary ny vola voaodinkodina tao anatin’ity tetikasa natao ho fampandrosoana aty amin’ny Faritra Afrika, toa an’i Madagasikara. Taorian’ny tatitra fitarainana tonga teny amin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly, niroso tamin’ny fanadihadiana lalina nandritra ny taona maro ny Bianco, ary fantatra fa mahatratra hatramin’ny 300 tapitrisa ariary ny vola very. Nisy ny fampiakarana ny raharaha teo anivon’ny fitsarana. Vokany, naiditra am-ponja vonjimaika omaly, ilay tomponandraikitra teo anivon’ity tetikasa ity. Andrasana indray raha hisy koa ny fifampiarovana amin’izao raharaha izao na handeha araka ny tokony ho izy ny raharaha. Tsy vao izao no efa nisy antontan-taratasy nanaovan’ny Bianco fanadihadiana lalina tahaka izao fa efa maro dia maro tokoa. Tafiditra ao anatin’izany ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”, izay mbola mahabe adihevitra ny tena fampiharan-dalàna marina momba ny raharaha fanodinkodinam-bola avo lenta tahaka izao.
Niditra tamin’ny fampiharan-dalàna
Tamin’ity taona ity, miavosa ny antontan-taratasy izay noraisin’ny Bianco an-tanana, indrindra indrindra momba ny resaka fampiharan-dalàna. Anisan’ny tafiditra ao anatin’ireo antontan-taratasy ireo ny momba ny resaka fanodinkodinam-bola teo anivon’ny Banky foibe tany Manakara, ny raharaha andramena naha voasaringotra an’i Bekasy. Ankoatr’izay, ny fanodinkodinam-bola mahakasika tahiry momba ny fampandrosoana, ankoatra ny vola voahodina teo anivon’ny Jirama, izay mitentina hatrany amin’ny 360 miliara ariary. Tsy ireo ihany fa mbola misy ireo antontan-taratasy goavana izay an-dalam-panadihadiana ny eo anivon’ny Bianco. Etsy ankilany izay, vola tsy toko tsy forohona no very mahakasika ny resaka fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena voajanahary. Iray amin’ireny ny ao Antsohimbondrona – Ambilobe, momba ny resaka fitrandrahana momba ny volamena, tafiditra ao any Kaominina Betsiaka, izay nahaverezana hatrany amin’ny 2.165.067.887 ariary, izay tokony hiditra any amin’ny Fanjakana malagasy. Tafiditra ao anatin’ny fanadihadiana lalina tanterahin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly amin’izao, ny resaka famatsiam-bola manokana ireo Kaominina, izay maro dia maro tokoa. Ny antontan-taratasy momba ny resaka hazo sarobidy mahatratra hatrany amin’ny 4500 t izay mitentina hatrany amin’ny 3600 miliara ariary, izay efa an-dalana ny fandinihina azy io, saingy misy antontan-taratasy hafa mifanindran-dalana azy io. Hatraiza ny tena fampiharana ny mangarahara, indrindra ny mahakasika ny harem-pirenena tahaka izao?
Misy hatrany ny sakantsakana
Fenitra tadiavin’ny Iraisampirenena ny ady amin’ny kolikoly. Teboka iray ahafahana miroso any amin’ny fampandrosoana eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fanatanterahana azy io. Miseholany anefa ny sakantsakana amin’ny fanatanterahan’ny Bianco ny asany amin’ireo manampahefana maro isan-karazany. Mbola ezaka goavana ny fanatanterahana ny tany tan-dalàna sy ny fahaiza-mitantana eto Madagasikara. Ny fampiharana ireo lalàna vaovao mifandraika ny ady amin’ny kolikoly anefa no nampiharina mba hahatongavana amin’ny fenitra tadiavina momba ny ady amin’ny kolikoly, hisian’ny tena fampandrosoana marina. Fositra iray mbola mampihitsoka ny ady amin’ny kolikoly ny fisian’ireo tsimatimanota, izay tena mpanao kolikoly ary tena fanetriben’ny firenena. Ankoatr’izay, mba tsy hahatonga ny kolikoly hahazo laka, isan’ny fenitra iray nandraisan’ny eo anivon’ny Bianco andraikitra ny hampidirana ny ady amin’ny kolikoly ho ao anatin’ny fandaharam-piananarana. Tafiditra amin’izany ny eo anivon’ny ambaratonga voalohany sy faharoa. Ny fandraisana andraikitra ny rehetra no anisan’ny fanoitra iray hoenti-miady amin’ny kolikoly. Isan’izany ny ireo tomponandraikitra ambony, ny olompirenena, ny mpitondra fiangonana, ny mpanao gazety…Tiana ny mampahatsiahy fa miezaka ny hampihatra lalàna hatrany ny eo anivon’ny Bianco, indrindra mahakasika ny fanitsakitsahan-dalàna miseholany. Mitovy avokoa ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna ary tsy misy mihitsy ny fizahan-tavan’olona eo am-panatanterahan’ny Bianco ny asany.